ကျောင်းဆရာများကို ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ရက်တိုသင်တန်းခေါ်ယူ |
« အစိုးရငွေကြေးဖြင့် ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ရုံးစတင်ဆောက်လုပ်
နအဖတပ်စခန်း တခု မီးလောင် »
ကျောင်းဆရာများကို ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ရက်တိုသင်တန်းခေါ်ယူ
၁၁ မေလ ၂၀၁၀၊ ချင်းပြည်နယ်တွင် မကြာသေးခင်က ဖွဲ.စည်းခဲ့သည့် မြို.နယ်ရွေးကောက် ပွဲကော်မီရှင်အဖွဲ.က ဒေသ အတွင်းကျောင်းဆရာများကို ၂၀၁၀ ရွေးကောက် ပွဲဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရက်တိုသင်တန်း ခေါ်ယူ နေသည်ဟု သိရသည်။
ချင်းပြည်နယ်အထက်ပိုင်း ဖလမ်းမြို.နယ်တွင် ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလကတည်းကစပြီး ကျောင်း ဆရာ၊ ဆရာမ များကို အသုတ်လိုက်ဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ရက်တို သတန်း ပို.ချခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သင်တန်းကာလ မှာ ၁၀ ရက်ဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။
သင်တန်းကို ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မီရှင်အဖွဲ.၀င်များက ဖလမ်းမြို.နယ် အထက(၁)ကျောင်းတွင်ပို.ချ ပေးနေပြီး ရွေးကောက်ပွဲ၊ တပ်မတော် နှင့် ကြံ.ဖွံ. ကဏ္ဍဆိုပြီး အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲကာအသီးသီး ပို.ချပေးနေခဲ့ သည်ဟုဖလမ်းမြို.ကျောင်းဆရာမတဦးကပြေသည်။
“ပထမသုတ်အဖြစ် ထက်ပြဆရာများကို ခေါ်ယူတယ်၊ ဒုတိယသုတ်အဖြစ် လယ်ပြတွေကို ခေါ်တယ်၊ အခု မေလမှာ လယ်ပြတွေကို ခေါ်ယူတယ်၊ လယ်ပြတွေပြီးယင် မူပြတွေလာမယ်” ဟု ကျောင်းဆရာက ပြောသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကျောင်းဆရာများအနေဖြင့် မိမိကျောင်းသားများကို ကြံ့ဖွံ့ပါတီအတွက် မဲထည့်ပေးဖို. စည်းရုံးရန် နှင့် ကြံ့ဖွံ့ပါတီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံများကို ပို့ချကြောင်း အဆိုပါ ကျောင်းဆရာမက ဆက်လက်ပြောပြသည်။
ချင်းပြည်နယ်တွင် နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်အတွင်း ပညာရေးဆိုင်ရာမွမ်းမံသင်တန်းကို မြို့နယ်အလိုက် ခေါ်ယူလေ့ရှိသော်လည်း ယခုနှစ်နွေရာသီတွင်မူ ကျောင်းဆရာ မွမ်းမံသင်တန်းအစား ရွေးကောက်ပွဲဆိုင် ရာ ရက်တိုသင်တန်းကို ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။